Sony Xperia Z4 Tablet ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Sony Xperia Z4 Tablet ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Sony ရဲ့တက်ဘလက်အမြဲမြတ်သောပြီ, ဒါပေမယ့်ဗူးထံမှထွက်ရပ်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြ. အဆိုပါက Xperia Z4 Tablet ကိုသေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအများဆုံးထက်ပိုမိုပါးလွှာပြီးပေါ့ပါးဖြစ်ပါသည်, အလွန်ကြီးစွာသော screen နှင့်အစိုင်အခဲဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူ.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Sony Xperia Z4 Tablet ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: လည်းတစ်ဦးကို Android နဲ့ Laptop ရဲ့သောပါးလွှာသောတက်ဘလက်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 19 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 05.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Sony ၏ Xperia Z4 Tablet ကိုသေးဂျပန်ကုမ္ပဏီရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, သေးငယ်တဲ့ bezel နှင့်အတူ, တောက်ပတဲ့ screen နဲ့တစ်ဦးရေစိုခံခန္ဓာကိုယ် - သင်မူကား, အမှုအရာစိတ်ဝင်စားစရာရရှိရန်စတင်ကြောင်းအပြည့်အဝကီးဘုတ်ထည့်ပါတဲ့အခါင်.
Sony ကယခုရှေ့တော်၌ထို Z ကိုစီးရီးသို့နှစ်ဦးမြတ်သော entries တွေကိုနှင့်အတူတက်ဘလက်အတွက်အစိုင်အခဲအမွေအနှစ်ရှိပါတယ်. သူတို့အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာရောင်းဖို့ပျက်ကွက်နေချိန်မှာ, သူတို့ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး Android tablet များအချို့ကိုပြီ. တကယ်တော့, သူတို့သာ Android အတွက်တက်ဘလက်-optimized ဆော့ဖ်ဝဲဆင်းရဲသောသူကိုငွေပမာဏအားဖြင့်ချကြကုန်အံ့ပြီ. အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်နှင့် Apple ၏ iPad အကြားထို app ကွာဟချက်မရှိတော့ပါ.
ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုက Xperia Z4 Tablet ကိုတစ်ဦးအနီး-နောက်ဆုံး Pre-ထုတ်လုပ်မှုနမူနာအပေါ်အခြေခံသည် - အချို့သောရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်, ဒီမြင့်မားမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့.
အပါးလွှာဆုံးနဲ့အပေါ့ပါးဆုံး 10in တက်ဘလက်
အထူ 6.1mm မှာ, တက်ဘလက်အပါးလွှာဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်ပါးလွှာသည်, တစ်ဦးနှင့်ထိတွေ့ပေမယ့်ရေစိုခံအသေးစားကို USB port ကိုနှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါက Xperia Z4 Tablet ကိုနှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲအတွက်လုပ်မယ့် Sony ကစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet အပေါ်မျက်စိထားသူမည်သူမဆိုဖို့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်: ပါးလွှာ, ရေစိုခံကိုယ်ခန္ဓာ, အနက်ရောင် bezel နှင့်တစ်ဦးတောက်ပ LCD မျက်နှာပြင်.
အ Z4 များအတွက်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုအိမ်ရာ၏အရွယ်အစားသည်. မျက်နှာပြင်တူညီ 10.1in ဖြစ်ပါသည်, တစ် pixel သိပ်သည်းဆနှင့်အတူယခုပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad HD ကို 299 လက်မအရွယ်ကတော့ pixels per, ဒါပေမဲ့မျက်နှာပြင်ပတ်လည် bezel ကျန်ရှိတော့သည်ကြပါပြီ - တက်ဘလက် 12mm ပိုမိုတိုတောင်းခြင်းနှင့် 5mm ကျဉ်းဖြစ်ပါသည်, ကရရှိနိုင်ပါအသေးဆုံး 10in ဆေးပြားများ၏တဦးတည်းအောင်.
အလောင်းကို 6.1mm တစ်ဦးအထူနှင့်အတူပါးလွှာသည်, 393g မှာအလင်း, နဲ့ Hard-ဝတ်ဆင်အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်နှင့်အတူ discrete ပြန်, စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူနှင့်တက်ဘလက်ကျဆင်းသွားလျှင် shattering မျက်နှာပြင်ကိုရပ်တန့်ဖို့ရည်ရွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နိုင်လွန်ထောင့်. ဒါဟာသေးတစ်ဦးနားလည်ဒီဇိုင်းနှင့်အပါးလွှာဆုံးနဲ့အပေါ့ပါးဆုံးကြီးမားသောတက်ဘလက်င်.
အဆိုပါ 2K မျက်နှာပြင်သည်ကြီး: က pin ကိုချွန်ထက်င်, အလွန်တောက်ပပြီးအလွန်ကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုထောင့်နှင့်အတူ. က Galaxy Tab S ကိုအပေါ် Samsung ရဲ့ OLED မျက်နှာပြင်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ဒီလို Apple ၏ iPad Air လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် LCD screen များ၏အသိမ်မွေ့သောအရောင်အဆင်းနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ် 2.
အများဆုံးစမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များသုံးခြစ်ရာယဉ်ဖန် - - မျက်နှာပြင် Gorilla Glass ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသည်မဟုတ်ပေမယ့်အစား Sony ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြစ်ရာယဉ်ဖန်နှင့်အတူ. အတိတ်ကာလများတွင် Sony ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်ပြိုင်ဘက်အဖြစ်ခံနိုင်ရည်ခြစ်ရာကဲ့သို့ဖြစ်မသက်သေပြခဲ့သည်. တစ်ဦးက screen ကိုကာကွယ်ပညာရှိတဲ့ဝယ်ယူဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
Screen ကို: 10.12K အတွက် (2560×1600) LCD ကို (299ppi)
ရမ်: 3GB ကို
သိုလှောင်ခြင်း: 32GB ကို + microSD ကဒ်စာဖတ်သူကို
ကင်မရာကို: 8.1အမတ်နောက်ဘက်, 5.1အမတ်ရှေ့-face
connectivity ကို: ဝိုင်ဖိုင်, ဂျီပီအက်စ်, ဘလူးတုသ်, FM ရေဒီယို, optional ကို 3G / LTE ကို
ဒိုင်မန်းရှင်း: 254 x က 167 x က 6.1mm
အလုပျအတှကျ Long ကဘက်ထရီသက်တမ်း, ဂိမ်းကစားဘို့အတို
အဆိုပါ 2K LCD မျက်နှာပြင် pin ကို-ချွန်နှင့်တောက်ပဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အာဏာကိုအကျိုးရှိစွာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Z4 Tablet ကိုတလျှောက်လုံးအစာရှောင်ခြင်းနှင့် snappy ဖြစ်ပါသည်, Qualcomm ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထိပ်တန်း-of-the-line ကို Processor ကိုအပြေး, အ octacore Snapdragon 810 သိုလှောင်မှုရမ်၏ 3GB နှင့် 32GB နှင့်အတူ, ပေါင်းကာ microSD card slot.
အဆိုပါ Snapdragon 810 စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့အပူလွန်ကဲကိစ္စများအားဖြင့်အနှောငျ့ခဲ့. အဆိုပါ Z4 Tablet ကိုထိုကဲ့သို့သောတစ်ချိန်တည်းမှာ application များတစည်းကို install အဖြစ်မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းနွေးရပါဘူး, ဒါပေမဲ့အလျင်အမြန်အေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာယေဘုယျအသုံးပြုမှုအတွက်မထိခိုက်သည်.
ယေဘုယျအားအဆိုပါ Z4 Tablet ကိုသဖြင့် Samsung Galaxy S6 ပါလိမ့်မယ်တို့တွင်အရှင်သခင်ငါဒီနှစ်ကိုအသုံးပြုကြပါပြီအတော်လေးအမြန်ဆုံး Android device ကိုမဟုတျပါဘူး - ဒါပေမယ့်သိသိသာသာပိုမြန်မနှစ်ကအကောင်းဆုံး Android tablet ကိုထက်, Samsung က Galaxy Tab S.
ဘက်ထရီသက်တမ်းတစ်ဦးရောနှောအိတ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည် - သည့်အခါစကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့ထက်ပိုမိုကိုးနာရီအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တစ်ရက်ပေးခြင်း (ကအပေါ်ကိုပိုမိုနောက်ပိုင်းတွင်) - မဟုတ်အံ့မခန်းဂိမ်းများကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို processing power လိုအပ်သည်ဘာမှကစားသောအခါ. အဲဒီအောက်ပိုင်း-ပါဝါ Quad-core chip ကိုနှင့် higher-performance ကိုကြားခြားနားချက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဖွယ်ရှိင်, လိုအပ်တဲ့အခါအဲဒါကို switches ပိုအာဏာဆာလောင်မွတ်သိပ်ချစ်ပ်.
Sony ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ power-saving Modes သာရက်ပေါင်းအားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်, အနိုင်နိုင်စွမ်းရည်ကန့်သတ်ပေမယ့်သိသိသာသာ standby အသက်ကိုစောင့်ကြောင်း Modes သာအပါအဝင်.
တစ်ဦးက start menu ကို Is?
တစ်ဦးက start menu ကို Is သို့မဟုတ်သင်ငါ့ကိုတွေ့မြင်ရမှပဲကျေနပ်နေကြသည်? ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တက်ဘလက်၏အပြင်ဘက်တွင်နှင့်ဝသကဲ့သို့, အတွင်းပိုင်းကိုလည်းအတိတ်ကာလငါးနှစ်အတွက် Sony ကထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုမယ့်သူမည်သူမဆိုဖို့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်, ထိုကဲ့သို့သော Sony ကတီဗီတစ်ခုသို့မဟုတ် PlayStation အဖြစ် 4.
အဆိုပါ Z4 Tablet ကို Google ၏ Android ပြေး 5.0.2 Lollipop ကားထုံးစံကြည့်တွေနဲ့. ဒါဟာအစွန်းရောက်မဟုတ်ပါဘူး, သာသေးငယ်တဲ့အမြင်အာရုံအပြောင်းအလဲနှင့်အတူအများအားဖြင့်က Android တူ. အဓိကဖြည့်စွက်မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက် icon တွေကိုတစ်ဦးတာဝန်-bar ကိုကဲ့သို့နောက်ထပ် menu ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုပါပြီ, ကီးဘုတ်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမကြာသေးမီ apps များနှင့်အခြား setting များနှင့်အတူတစ်ဦးက start menu ကို.
Sony ကလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် apps များတဲ့ဝန်အစုအဝေးကို, အဆိုပါအစိုင်အခဲ Walkman app နဲ့တစ်လျောက်ပတ်သောဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာအပါအဝင်. တစ်ဦးက Navigon satnav နှင့် AVG antivirus ကို app ကို Pre-installed လာပေမယ့်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်.
ကီးဘုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်လျောက်ပတ်သောက Android-based PC ကိုစ Z4 Tablet ကိုလှည့်, ယင်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြားမှထိတွေ့စာရိုက်အတွက်လုံလောက်သောကောင်းသောသော့နှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
၎င်း၏အသစ်ကတက်ဘလက်များအတွက် Sony ရဲ့ကြီးမားတဲ့တွန်းအား PC များနှင့် tablet အကြားရှိ crossover အာကာသသို့ယူနေသည်. ကုမ္ပဏီတက်ဘလက် slot နှစ်ခုဖြစ်သောသို့အသစ်တခုကဘလူးတုသ်ကီးဘုတ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. စက်တစ်လက်ပ်တော့များကဲ့သို့ပြုမူသည့်ပါးလွှာနဲ့အလင်းကီးဘုတ်, ဆိုက်ကပ်သည့်အခါဒါဟာအပြည့်အဝထောင့်-ချိန်ညှိပတ္တာရှိပြီး.
ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါကိုသုံးဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်ကီးဘုတ်ထဲကတစ်ခုဖွင့်. သော့အတော်လေးတိုတောင်းများမှာ, ဒါပေမယ့်ကောင်းသောခရီးသွားလာမှုနှင့်ခံစားအတူနီးပါးအပြည့်အဝအကျယ်ရှိပါတယ်. ဒါဟာ screen ပေါ်မှာရိုးရာ mouse ကို cursor အမှီ ပြု. သောအောက်ခြေမှာတစ် trackpad ရှိပါတယ်, Multi-touch နဲ့အမူအရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်, ဒဏ်ငွေ-စပါးကိုထိန်းချုပ်ဘို့ကအသုံးဝင်အောင်.
ကီးဘုတ်သီးခြားဘက်ထရီရှိပြီး microUSB ဖြင့်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်. ပိတ်ထားသည့်အခါ, က screen ကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်တစ်ဦးအလွန်ပါးလွှာနဲ့အလင်းကို PC အစားထိုးဖန်တီး. ကီးဘုတ် 365g အလေးချိန်, အရာအလုံးစုံအထုပ်စေသည်, တက်ဘလက်နှင့်အတူ, ပဲ 758g အလေးချိန်: ပတ်ပတ်လည် 200g ဆိုလက်တော့ထက်ပိုမိုပေါ့ပါး.
ကီးဘုတ်ကဤသုံးသပ်ချက်ကို၏တပြင်လုံးကိုရေးသားဖို့သုံးစွဲဖို့အလုံအလောက်ကောင်းသည်နှင့်တခြားဆောင်းပါးများကိုနေစဉ်မီးရထားပေါ်တွင်စားပွဲခုံမှာသို့မဟုတ်ငါ၏အပေါင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်. အကြှနျုပျ၏သာအစစ်အမှန် niggle ညာလက်ပြောင်းကုန်ပြီ key ကို directional မြှား၏ညာဘက်ထားရှိကြောင်းခဲ့တယ်, ငါထိစာရိုက်နေစဉ်ဘယ်ဘက်မျဉ်းစောင်းနှိပ်ထားရှိမည်အဓိပ္ပာယ်.
တက်ဘလက်တစ်ဦးအစိုင်အခဲကင်မရာရှိပါတယ်, သင်မူကား, ယဉ်ကျေးကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုရန်မဖြစ်သင့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Sony ကမိုဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကင်မရာများအချို့စေသည် - iPhone နှင့် OnePlus တစ်ခုမှာဥပမာ Sony ရဲ့ကင်မရာကိုသုံးပါ. အဆိုပါ 8.1 အဆိုပါ Z4 Tablet ကို၏နောက်ကျောအပေါ် megapixel ကင်မရာလျောက်ပတ်ဖြစ်ပါသည်, လျှင်မခြွင်းချက်, နှင့်ဖြစ်ကောင်းကိုအကောင်းဆုံးတက်ဘလက်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်တစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါ front-facing 5.1MP ကင်မရာလျောက်ပတ်သော selfies ကြာနှင့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကင်မရာစေသည်.
အဆိုပါ Sony Xperia Z4 Tablet ကိုကြိုတင်မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်, မေလကုန်တွင်မှာကီးဘုတ်ရေကြောင်းနှင့်အတူသာ version ကို Wi-Fi ကိုအဘို့အ£ 499 ကုန်ကျ. 4G မိုဘိုင်းဒေတာတွေနဲ့တစ်ဦးကဗားရှင်းနောက်ပိုင်းရက်စွဲမှာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်, မြင့်မားသောစျေးနှုန်း tag နဲ့.
တစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့, Samsung ရဲ့ 10.5in က Galaxy Tab S ကိုပစ်လွှတ်နှင့် Apple ၏ iPad Air လေကြောင်းလိုင်းမှာ£ 399 costed2£ 399 ကုန်ကျ, ကီးဘုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းမရှိဘဲနှစ်ဦးစလုံး.
ဒါဟာအစရေစိုခံမယ့်, မည်သည့် fiddly အဆိုပါအားသွင်းဖုံးအုပ်တံခါးများသို့မဟုတ်နားကြပ်ဆိပ်ကမ်းများမပါဘဲ, ရာရေစိုခံဖြစ်ခြင်းမရှိကျဘက်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ရှိမယ့်ဆိုလိုတယ်.
တက်ဘလက်ကီးဘုတ်နဲ့ပေါင်းစပ်သောအခါဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းနည်းဖြစ်ပါသည်, ပါးလွှာသောအလွန်နိုင်စွမ်းနဲ့ရိုးရိုး Laptop ကိုအစားထိုးအောင်, အများဆုံးထက်ပိုမိုပေါ့ပါးနှင့်ဘက်ထရီအပေါ်ရှည်ကြာ.
အကောင်းအဆိုး: ထူးအိမ်သင်, အလင်း, ရေစိုခံ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကီးဘုတ်, microSD card slot, 2K သည်ဖန်သားပြင်
Cons: အချို့သောအဖြစ်မဟုတ်အတော်လေးအဖြစ်ကြံ့ခိုင်ခံစားမှု, စျေးကြီး, variable ကိုဘက်ထရီသက်တမ်း, အဘယ်သူမျှမ Gorilla Glass
• Samsung ၏ Galaxy Tab S ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကအသစ်တစ်ခုတွက်ရင်
• Apple က iPad ကို Air လေကြောင်းလိုင်း2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု : သေး Apple ရဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်, သို့သော်လုံလောက်ပါတယ်?
• Microsoft က Surface က3ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အကောင်းဆုံးအတက်ဘလက်-Laptop ကို hybrids တွေကိုတယောက်
Android မှာ, အပိုဒ်, computing, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, laptop များ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, Sony က, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← စိတ်ကျရောဂါသည်အ Non-ဆေးဝါးကုသမှုအတွက်အသစ်မှတ်တိုင် ဟွာဝေး P8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →